I-China Cat incwadi kadokotela yeso elibomvu izibuko zokukhanya eziluhlaza okwesibhakabhaka uhafu wokufunda izibuko zamehlo ifektri nabakhiqizi |I-D&L
Umyalelo wekati weso elibomvu izibuko zokukhanya eziluhlaza okwesibhakabhaka uhhafu wokufunda uhlaka lwezibuko
I-DLO1536 Ukuthengiswa okushisayo amafreyimu ezibuko zamehlo zekati ezikhanyayo eziluhlaza okwesibhakabhaka kwabesifazane, lesi yisitayela somklami esingasetshenziselwa ihhovisi, ukufunda, njll.
Izibuko zethu ze-DL zifaka ngelensi yokuvimbela ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka
Nikeza ukuvikelwa okungu-100% kwe-UV njengoba kusiza ukwehlisa i-digital eyestrain
Hlanza amafreyimu namalensi ngento yokugeza izitsha ethambile (ungalinge usebenzise isicoci sengilazi nanoma yini equkethe i-ammonia, i-bleach, noma uviniga) futhi womise kahle ngendwangu ehlanzekile, ethambile, noma uyeke umoya wome.
Ikusiza ukuthi unciphise ukucindezelwa kwamehlo
Uma uchitha isikhathi esiningi ugqolozele isikrini futhi uzwa izimpawu zokuxineka kwamehlo, ukungaboni kahle, noma ikhanda elibuhlungu, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kungase kuhlotshaniswe.Ungase uthande ukuxoxa ngezixazululo ezikulungele, njengezibuko ezivimba ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka zamehlo akho.
Izibuko Ezivimbela Ukukhanya Okuluhlaza :Vikela impilo yakho yedijithali
✿[Ukuvimba Izingilazi Ezikhanyayo Eziluhlaza Kwabesifazane] Izibuko ezivimbela i-Cateye blue blocker anti ray eluhlaza eyingozi kanye nokuvikelwa kwe-UV400.Izibuko ezikhanyayo eziluhlaza zingancishiswa ngempumelelo ngokukhanya Okuluhlaza ku-PC/TV/Phone/iPad.Vikela iso ngokukhanya okuzuzisayo.
✿[I-Lightweight Resin Material] Ilensi ebonisa ngale ye-acrylic ecacile kakhulu ngeke ibangele ukuhlanekezela indawo yokubuka, Ihlunga ukubenyezela okucasulayo ukuze uphephe kangcono lapho ushayela.Ilungele ukuhamba ngezinyawo futhi ujabulele ngaphandle.
✿[I-Fashion Cat eye Design] Uhlaka lweso lwekati olunesitayela luhambisana nomklamo onethezekile wohlaka oluyingxenye, ofaneleka kakhulu kwabesifazane abaphishekela ukuthrenda.Amafreyimu wokuthungwa kwesithwathwa wekhwalithi ephezulu ahlinzeka amakhasimende ngolwazi oluhle lomsebenzisi.
✿[Izinsuku Eziqinisekisiwe Ezingu-30] Ukwaneliseka kwekhasimende kuyinto ehamba phambili yethu.Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukusithumelela i-imeyili, sizokunikeza impendulo egculisayo.
Imininingwane iholela kukhwalithi,Isevisi yenza i-DL GLASSES iqhubekele phambili:
Izibuko ze-DL Izibuko zekhompyutha ezivimbe ukukhanya okuyingxenye yohlaka oluhlaza okwesibhakabhaka ziyisinqumo sakho esingcono kakhulu:
-Isihlungi sokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka sokunciphisa ubunzima bamehlo, Yehlisa izinga lezifo zamehlo.
I-Anti-scratch, i-anti-reflective, i-UV enamathelayo kanye nokudlulisa ukukhanya ukuze uthole ukubona okungcono.
-I-coating eyenziwe ngokukhethekile ivimba ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuyingozi ngaphandle kokuhlanekezelwa kombala okubonakalayo.
-Stylish & ezithengekayo eyewear ozimele nganoma yisiphi isikhathi.
-Yehlisa ukuqina kwamehlo, ukucwayiza, ukunciphisa ikhanda/ikhanda elibuhlungu, Ukungakhathali, ukungaboni kahle, inikeza izinga lokulala elingcono.
-Cateye blue screen glasses for women,Ladies computer glasses.
-Fashion Cateye iduduza izembatho zamehlo zenyanga & & nozimele wepende wekhwalithi ephezulu ye-matte.
-Imibala egqamile, Uhlukile esixukwini.Uthandwa ama-fashionistas!
-Sebenzisa i-Zero-Risk yethu, Ayikho imibuzo ebuzwa isiqinisekiso esingu-100% uma u-oda ngaphambi kokuphela kokulethwa!
Okwedlule: Okusanda Kufika I-China Circle Frame I-Oversized Beach Vacation Izibuko Zelanga Zemfashini Ngokwezifiso
Olandelayo: I-Oversize Square Anti blue Glasses Glasses Frame Yabesifazane
I-Anti - ifreyimu yensimbi eluhlaza okwesibhakabhaka efunda i-Unisex Gl...
Izibuko Ezinkulu Eziluhlaza Ezisasibhakabhaka Unisex Okukhanyayo Okuluhlaza Okukhanyayo...